Global Voices teny Malagasy » Mankalaza ny Halloween tsotsotra any Japana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Novambra 2019 4:47 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Hehy, Mediam-bahoaka, Vaovao Tsara
Fanamian'ny “lehilahy nofohazin'ny ràn'orona tamin'ny 3 ora maraina” , ampahany amin'ny hetsika Mundane Halloween (Halloween fanaon'izao tontolo izao) isan-taona ao Japana. Pikantsary tao amin'ny YouTube .
Nanomboka ny taona 2017, lasa fomba amam-panao amin'ny volana Oktobra any Japana ny hetsika iray antsoina hoe Mundane Halloween (地 味 ハ ロ ウ ィ ン, Halloween “tsotsotra”, “tsy misy mamo”, “mankaleo” na “fanaon'izao tontolo izao”) . Mitafy akanjo tsotra ny mpandray anjara izay natao mampihomehy mifanohitra amin'ny fitafiana namboarina sy fitondran'ny olon-drehetra amin'ny Halloween.
Natao ny Alahady 27 Oktobra tao Tokyo ny Mundane Halloween tamin'ity taona ity. Ny Rakuten, ilay tranonkala fiantsenana malaza an-tserasera no nandray ny fihaonana ary nalefa mivantana  tao amin'ny YouTube izany. Saika nozarain'ny olona an'arivony tao amin'ny Twitter avy hatrany, tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny tenirohy ( #地味ハロウィン  , Jimi Halloween ) ny sarin'ireo fitafiana, ary ny tranonkala Japoney Daily Portal  no namoaka ny maro tamin'ireo sary tsara indrindra. Naka tahaka am-panesoana ireo nalaza amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny fitafiana, toy ny dite tapiôka, izay niroborobo manerana an'i Japana tamin'ny fiandohan'ity fahavaratra ity.
Nanomboka ny Halloween tsotsotra! Lasa mpisera Instagram izay tsy mahay ny fisotroana dite tapiôka aho tamin'ity taona ity.
Nahitana fanitaran-kevitra mampihomehy ny ankamaroan'ny fitafiana .
“Penina nitsonika tao anaty paosin'ny” lobaka.
App-tava (hatran-tava) fanovana endrika nisafidy ny fanovana tarehy amin'ilay tsy izy”.
Nanjary niteraka adihevitra tato anatin'ny taona vitsivitsy ny alina fankalazana ny Halloween taoTokyo satria maro ny vahoaka mamo tao amin'ny toeram-pihaonana malaza Shibuya. Nisy fitafy iray nahatonga korontana nataon'ny olana sasany nifety Halloween tamin'ny taona 2018.
olona mitafy toy ilay kamio izay nahongana tamin'ny herintaona
Toa miparitaka any ivelan'i Japana ihany koa ny Halloween tsy misy mamo na tsotsotra. Mandefa sary maro be ilay mpisera Twitter @cheryll , anisan'izany ity iray manaraka ity:
Nataonay tamin'ny endriny hafa ny Halloween Tsy Misy Hamamoana/Tsotra tany Japana omaly , eto izao i “Guy tsy manaiky handeha mihoatra ny indray avy ao amin'ny fiara”
Azo jerena ao amin'ny kaonty Twitter Mulboyne , bilaogera malaza ao Japana sy ao amin'ny Kotaku  ny fitafiana Halloween Tsy Misy Hamamoana Japoney betsaka kokoa tamin'ny taona 2019 sy ny tamin'ireo taona hafa efa lasa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/04/144470/
 Pikantsary tao amin'ny YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Whf4O0JHfnQ
 kaonty Twitter Mulboyne: https://twitter.com/Mulboyne/status/1179631173653258240